UMongameli eTunisia - UKaïs Saïed: "Kumele samukele imithetho yomdlalo, kepha hhayi uhlelo" - JeuneAfrique.com - Teches RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO Ukhetho lukaMongameli eTunisia - Kaïs Saïed: "Kufanele samukele imithetho yomdlalo, kepha hhayi uhlelo" - JeuneAfrique.com
Isisekelo sezombusazwe, umfundaze enyuvesi esethathe umhlalaphansi, ungokhetho lokuchibiyela ukhetho lwe15 Septhemba. Ezinyangeni ezimbalwa, lo ozimele ukhuphukele esiqongweni sokuvota, ngaphandle kokuthi abe neqembu noma iqembu lomkhankaso wangempela. Inemininingwane yeJeune Afrique izinhloso zayo nokubaluleka kwayo.
Iphini likamongameli ozimele uKaïs Saïed wayengahlala engaphandle. Ngaphandle kokwakheka kwezepolitiki, wayengaziwa kahle ngabaseTunisia, ngaphandle kwezingubo zakhe zokuzishayelela umthetho-sisekelo. Akubekwa kahle ezindaweni zokuvotela umjikelezo wokuqala wokuvota, ohlelelwe iSonto Septhemba 15.
Lo mmeli oqondile, onamanani okulondolozwa, uvame ukulwela ukulunga kwakhe kanye nenkulumo yakhe ehlanjululwe kodwa eyisimangaliso ngesiArabhu sakuqala, uzichaza ngokuthi "ngaphandle kokujwayelekile". Ihlukaniswe phakathi kwe-antisystem, ifuna umbiko omusha wenqubomgomo futhi ihlose ngale njongo ukuthi kubukezwe uMthethosisekelo. Ngesikhathi lapho abaphathi be-visa abadumazayo be-visa abahlukaniswe kakhulu yizakhamizi zaseTunisia, iresiphi ibonakala isebenza.
Intsha yase-Afrika: Yiziphi izindlela eziphambili zohlelo lwakho?
Kaïs Saïed: Anginalo uhlelo lwendabuko ngoba ngiyakholelwa nakanjani ukuthi abantu baseTunisia, njengabanye, bangene esigabeni esisha somlando. Izakhamizi azilindi ukuthi izinhlelo zinikezwe okhethweni, kepha zifuna ukuba ngabalingisi kwezepolitiki yansuku zonke.
Sidinga inhlangano entsha yezokuphatha nepolitiki, ubudlelwano obusha bokuthembana phakathi kwabantu nababusi. Umlingisi ophambili kumele kube ngabantu, yingakho ngizama ukumnika izindlela ezingokomthetho zokukhetha uhlelo lakhe lokuthuthuka.
UKaïs Saïed wayengomunye wabafundi bokuqala abazomenyezelwa okhethweni lukamongameli waseTunisia. © Youtube / Abdelmagid ZARROUKI
Umhlangano omusha uzobe ubunjwe ngamaphini e-276, kufaka nabamele ama-11 baseTunisia abavela phesheya
Ngabe yini izindlela zakho zokubonisa umkhosi?
Enye yezinhloso zami ezinkulu wuphrojekthi kamongameli wezinguquko zomthethosisekelo, okuyigama lokugcina elizobuyela eMhlanganweni. Ngifisa ukusungula amandla azoshiya abendawo, ngokwakhiwa kwemikhandlu yasekhaya enhlanganweni ngayinye [yomnyango]. Amalungu abo azokhethwa ngokuvota okungezona ezemvelo futhi igunya labo lingaphindiselwa. Elinye lamalungu abo, akhethwe yinkatho, laliyomelela ezingeni lesifunda.
Amakhetho kaMongameli eCôte d'Ivoire: maqondana nokubuyiselwa komkhawulo wobudala? - I-YoungAfrica.com
Abantu basePalestine bagubha iminyaka engu-15th yokufa kukaYasser Arafat - VIDEO
Iziqhingi zaseNyakatho Mariana ziya esimeni sebhola
IJapoma Stadium ibalwe phakathi kweTop 20 Emhlabeni: FAKE IZINDABA
IMali: Amasosha e-24 aseMaliyane kanye "nabashokobezi" be-17 babulawa ngokulwa ngaseMenaka - JeuneAfrique.com
Umanyolo: I-OCP ihlela ukuthumela ikhomishini yaseNigeria ammonia ngaphambi kokuphela kwe2023 - JeuneAfrique.com